अार्इजीपी प्रकरण: आज पनि भएन फैसला ! « Khasokhas Follow @khasokhasmag
अार्इजीपी प्रकरण: आज पनि भएन फैसला !
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति प्रकरणबारे सर्वोच्च अदालतमा बहस सकिएको छ । फैसला आज पनि भएन । सर्वौच्च अदालतको फुल बेन्चले यो मुद्धामा बहस सकेपनि समय अभावका कारण फैसला मंगलवारमात्र सुनाइने बताइएको छ । आजको बहसमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलगायतको टोली सहभागि रहेको थियो । बहसको सुरुमा पहिला सरकारी वकिलले बहस गरेपछि डिआईजी नवराज सिलवाल र रिट निवेदक कपिलदेवका तर्फका विपक्षी वकिलले प्रतिउत्तर दिएका थिए ।
गत फागनु १ गते डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि अर्का डिआइजी नवराज सिलवालले आफु बरिष्ठ भएको भन्दै रिट दिएका थिए भने वकिल कपिलदेवले पनि रिट दिएका थिए । यसैवीच चनद र सिलवालका व्याजका प्रकास अर्यालले पनि आज अर्को रिट हालेका छन् । सिलवालले आफु कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा सिलवाल र चन्द भन्दा अघि रहेको रिटमा दावी गरेका छन् ।